အကြောင်းအရာ ၄.၀ မှလူအများဆီသို့ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 4, 2012 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
ဒီ Infographic ကသီအိုရီအရအကြောင်းအရာဟာအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမသေချာပေမဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ပါဝင်မှုနဲ့နည်းပညာတွေအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိတယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာ ၄.၀ ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်… များစွာသောမှအံ့သြစရာ!
မှ စက်နှိုး 2012: ဒီဂျစ်တယ်စားသုံးသူအတွက်မြေယာသိမ်းဆည်းမှုသည်အဓိကဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးမော်ဒယ်များလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ မိုဘိုင်းငွေပေးချေခြင်းမှမိုက်ခရိုငွေပေးငွေယူခြင်းအထိနည်းပညာများကိုကြော်ငြာနှင့် paywalls များအတွက်အပို ၀ င်ငွေမဟာဗျူဟာအဖြစ်ဖော်ထုတ်လျက်ရှိသည်။ “ မီဒီယာ” သည်အကြောင်းအရာမျှသာမဟုတ်၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ငွေပေးချေမှုနှင့်ပလက်ဖောင်းများကိုပါလွှမ်းခြုံထားသည်။
သတင်းအချက်အလက် အသိအမှတ်ပြုခြင်းနိုဝင်ဘာ ၂၇ မှ ၂၈ ရက်အထိနယူးယောက်မြို့၌ Business Insider မှပြုလုပ်သောညီလာခံ။
စက်တင်ဘာ 5, 2012 မှာ 6: 07 AM
တကယ်တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့လူတိုင်းကတစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး ချိတ်ဆက်ထားတယ်၊ ပြီးတော့မင်းကမင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပိုလွယ်အောင်ဖြန့်ဝေနိုင်တယ်။ ဒါဟာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်လာသည်။
5:2012 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 02 မှာ
ငါအချို့သော infographics ASAP ဖြင့်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါတယ်, သင်၏ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်!
5:2012 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 23 မှာ
မင်္ဂလာပါစတီဗင်၊ ငါတို့ရဲ့ infographics အားလုံးက DK New Media: http://www.dknewmedia.com/